Coronavirus ဗိုင်းရပ်စ်သည်ဆက်လက်ပျံ့နှံ့နေပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်းအလိုအလျောက်ဓာတ်ခွဲခန်းအဝတ်လျှော်မှုကိုစတင်အသုံးပြုကြသည်။ | Xipingzhe
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နွေ ဦး ရာသီတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောရောဂါကပ်ရောဂါသည်လူသားအားလုံး၏ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်စေသည်။ Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်သန်း ၆၀၀ ကျော်ကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ လူပေါင်း ၃၀၀၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်သူအမြောက်အများကဤကပ်ရောဂါသည်မကြာမီအဆုံးသတ်တော့မည်ကိုအကောင်းမြင်ကြသည်။ ရောဂါဆိုသည်မှာလူသားအားလုံး၏ရန်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုပါကရန်သူများရှိကြသည်။ စစ်သားများရှိသည်။ သူရဲကောင်းများရှိသည်။ ရှေ့တန်းတွင်သေနေသောကောင်းကင်တမန်များကိုကယ်တင်ရန်သူရဲကောင်းများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနရောဂါနှင့်ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးပစ္စည်းများသည်သူရဲကောင်းများဖြစ်သည်။ အရမ်းလွန်း ဒါပေမယ့်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး။ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနလုပ်ငန်းမှရရှိသောအခက်အခဲများနှင့်ဖိအားများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများကိုနေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အချိန်နှင့်ခွန်အားများစွာလိုအပ်သည်။ ဒါ့အပြင်ရေနဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလည်းမထည့်သွင်းပါဘူး။ သို့သော် CDC အခြေအနေတွင်အချိန်ကာလသည်အဓိကကျသည်။ ထို့ကြောင့် COVID-19 ဆက်လက်ပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှဆေးဝါးဓာတ်ခွဲခန်းများပိုမိုအလိုအလျောက်ဓာတ်ခွဲခန်းအဝတ်လျှော်စက်များကိုအသုံးပြုနေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
နောက်ထပ်ဓာတ်ခွဲခန်းကုန်ကျစရိတ်အတွက် 1.An တိုး
လူများသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏ရလဒ်များကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းရရှိနိုင်သည်ဟုထင်ရန်ခဲယဉ်းနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းနောက်အသုံးအဆောင်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်စမ်းသပ်မှုလုပ်ခြင်းထက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစက်ကိရိယာများသန့်ရှင်းရေးအတွက်အချိန်ကုန်ကျစရိတ်များပြီးအခြားလူမဟုတ်သောအခြားအရင်းအမြစ်များလည်းရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်သူသည်သတိမရှိသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ဆေးခန်းတွင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တိုင်းအလွန်တိကျသောရလဒ်များရရှိရန်အရေးကြီးသည်။ လက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးသည်ရေအမြန်နှုန်း၏အပူချိန်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သကဲ့သို့ရေယာဉ်၏သန့်ရှင်းမှုကိုလည်းမအာမခံနိုင်ပါ။ Coronavirus ၀ တ္ထုကဲ့သို့မစင်ကြယ်သောဖန်ထည်များနှင့်စမ်းသပ်နေသည်ဆိုပါစို့။ ထို့အပြင်ကွဲပြားသောဖန်ထည်အမျိုးမျိုး၏ဖွဲ့စည်းပုံကွဲပြားခြားနားပြီး၊ တန်ဆာပလာများကိုစနစ်တကျမသန့်ရှင်းသောကြောင့်စမ်းသပ်မှုများစွာမအောင်မြင်ပါ။ ထိရောက်သောဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကာကွယ်ဆေးသုတေသနအတွက်ဘက်လိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါကမည်သူသည်တာဝန်ရှိသနည်း။
Coronavirus လေ့လာမှုအသစ်တွင်ဓာတ်ခွဲခန်းများစွာသည်ရောဂါကူးစက်မှုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့၏လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတတ်နိုင်သမျှမြှင့်တင်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနေရာလွတ်၊ ရေဖိအားနှင့်အပူချိန်၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ ဆပ်ပြာနှင့်အခြားအညွှန်းကိန်းများသည်သန့်ရှင်းနေရမည်။ ကျန်းမာရေးပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလိုက်နာမှုအတွက်တစ်သမတ်တည်းသတ်မှတ်ချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ဖန်ထည်များကိုလက်ဖြင့်ဆေးကြောရန်အတွက်အာမခံချက်မရှိပါ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဤအချက်များအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိသည်, ဆိုလိုသည်မှာအလိုအလျောက်ဓာတ်ခွဲခန်း wahser ဝယ်ဖို့။ ဒီတော့ဒီလိုဓာတ်ခွဲခန်းရဲ့အလိုအလျောက်အဝတ်လျှော်စက်၏တိကျသောအားသာချက်များကဘာလဲ။
1. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်တပ်ဆင်ထားသောသန့်ရှင်းရေးပေါင်းစပ်မှုများစွာရှိသည်။ သန့်ရှင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ထပ်တလဲလဲပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း - ဖန်ထည်များကိုပိတ်ထားသောနေရာတွင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ပုံသေစီစဉ်ခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ရေဖိအား၊ ပရိုဂရမ်သန့်ရှင်းရေးအဘို့။ စက်မှုလယ်ယာသန့်စင်ပြီးနောက်ဖန်ထည်များအားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အလိုအလျောက်ပုလင်းအဝတ်လျှော်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းသောဖန်ထည်များသည်သန့်ရှင်းမှု၊ ကောင်းကျိုးပြန်ရနိုင်မှု၊ ထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အချက်အလက်များ၏ GMP နှင့် FDA လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ လက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းသည်အပူချိန်မြင့်မားစွာမလျှော်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အရည်အသွေးတစ်ခုလုံးကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ တံခါးပိတ်စနစ်၏လည်ပတ်မှုသည်အသုံးပြုသူ၏ကျန်းမာရေးကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးသည်။
2. နှောင့်နှေး function ကိုစတင်နှင့်စင်ကြယ်သော function ကိုအချိန်ကိုက်။ ရေနှင့်လျှပ်စစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ပါ။
သုတ်ခြင်း၊ ချေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ရန်သန့်ရှင်းခြင်းတောင်းကိုထိန်သိမ်းသည့်ခါးပတ်။
သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်လေ ၀ င်လေယာဉ်သို့စုပ်ထုတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးအာရုံစူးစိုက်မှု၏တိကျသောတွက်ချက်မှု
5.ICA module ဒီဇိုင်း၊ ခြင်းတောင်းစင်တာကိုလွတ်လပ်စွာလဲလှယ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုတည်နေရာအနေအထား။
6.ITL သော induction door positioning technology, buckle automatic expansion
၇။ တောင်းခံခြင်း၏သတ်မှတ်ချက်အရရေ၊ လျှပ်စစ်၊ စားသုံးဆီ၊ ထိရောက်မှုနှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များကိုထိရောက်စွာသက်သာစေသည်။
အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဓာတ်ခွဲခန်းအ ၀ တ်လျှော်စက်သည်ဓာတ်ခွဲခန်း၏ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့်စမ်းသပ်မှု၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ထိုအခါကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး၌ကျွန်ုပ်တို့အပြီးသတ်အောင်ပွဲခံမည့်နေ့သည်မဝေးတော့ပါတကား!